Shakuul oo kamid ah Ganacsatada Soomaalida Kenya oo ka digay in dibadbaxyo ay ka dhacaan Magaalada Nairobi gaar ahaan islii | Dayniile.com
Home Warkii Shakuul oo kamid ah Ganacsatada Soomaalida Kenya oo ka digay in dibadbaxyo...
Shakuul oo kamid ah Ganacsatada Soomaalida Kenya oo ka digay in dibadbaxyo ay ka dhacaan Magaalada Nairobi gaar ahaan islii
Soomaalidu ku badan tahay ee Islii kaddib xukunka Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo kamid ah Ganacsatada Soomaalida Kenya oo la hadlay VOA ayaa ka digay in dibadbaxyo ay ka dhacaan Magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Maxkamadda ICJ.
waxa uu ku sheegay in Soomaalida Kenya joogta qayb kamid ah ay taageersan tahay in Soomaaliya loo rido xukunka halka qaar kale ay daneynayaan in dhinaca Kenya loo go’aamiyo, taasina ay ka dhalan karto isku dhac sida uu hadalka u dhigay.
Maxamed Shakuul waxaana uu soo jeediyay in laga fogaado wax weliba oo abuuri kara rabsho keeni karta in la dhibaateeyo Dadka Soomaalida & Hantidooda sida uu hadalka u dhigay.
Previous articleWaddamada G20 oo maanta ka doodaya sidii dhaqaale loo siin lahaa Afghanistan loogana dhowri lahaa Taliban!
Next articleRaiisul Wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ugu hambalyey ummadda Soomaaliyeed Xuska Maalinta Calanka Soomaaliya
Inta la xaqiijiyay Saddex ruux ayaa ku dhimatay tiro intaasi ka badanaa way ku dhaawacmeen ka dib markii qarax uu goor dhow ka dhacay...